Maxaa ka cusub Garowe, iyo xaaladdaha siyaasadeed ee ka jirta halkaas. – V O S
Maxaa ka cusub Garowe, iyo xaaladdaha siyaasadeed ee ka jirta halkaas.
Dowladda Puntland ayaa dabagal xoogan ku heysa Gaadiid ka maqan oo dhowaan la ogaaday shaqsiyaadka ay ku maqan yihiin .
Gaadiidkan Maqan ayaa ah kuwo dowladda ay leedahay, waxaana la sheegay in ay ku maqan yihiin shaqsiyaad ka tirsan dowladda iyo kuwa hore uga tirsanaan jiray, waxaana haatan socda tirakoobyada gaadiidka dowladda iyo sidii kuwa maqan dib loogu soo celin lahaa gaadiidkaas gacanta dowladda.
Waxa kale oo maalmahan la hadal hayay gaari noocyada madaxdu raacda ah oo ay ciidan gadiidsani u qabsadeen madax furasho, inkastoo dib looga soo celiyay waasida wararkii ugu dambeeyay sheegayaane.
Waxa kale oo la isla dhexmarayay in gaariga la soo celiyay ay madaxtooyadda Puntland ku soo furatay lacag tira badan ka dib markii uu afka u galay ciidan gadoodsan oo sida la sheegay mu shaar la aa mudo ka badan 8 bilood.
Dhinaca kale waxaa garowe ka socda dhaq dhaqaaq siyaasadeed oo ay halkaas ka wadaan siyaasiyiin dooneysa in ay isu soo taagaan doorashada soo aadan ee Puntland kuwaas oo buux dhaafinaya goobaha shirarka iyo hotellada la isugu yimaado magaaladaas.
SAME PRESS -Garowe
Previous Wadooyinka Muqdisho Oo Xirxiran Iyo Amarkii Madaxweynaha Oo Laga Dhago Adeygay
Next wariye lagala baxay gurigiisa degmada wanlaweyn